Maamulka Degmada Dharkenley oo ka hadlay Haweenay Canug ay dhashay Uladhaqantay Sikabaxsan Bini Aadanimada -
Maamulka Degmada Dharkenley oo ka hadlay Haweenay Canug ay dhashay Uladhaqantay Sikabaxsan Bini Aadanimada
Sargaal ka mid ah Ciidanka Amaanka Maamulka Degmada Dharkenley ee Gobolka Banaadir ayaa waxaa uu sheegay in ay soo xireen haweenay Magaceeda ay ku sheegeen Leylo cali oo Suulida ku riday Canug ay dhashay.
Haweenaydaan ayaa waxaa la sheegayaa in ay shaqaalo ka ahayd Guri ku yaala Xaafaada Shooriyaasha ee degmada Dharkenley.
Leylo ayaa waxaa lasheegayaa in markii ay foosha qabatay Suulida aaday ka dibna Markii ilaahay kala keenay Canugii ku riday Suulida ka dibna Raacisay biyo leh koloriin sida dadka deegaanka ay inoo sheegeen.
Canugaan ayaa waxaa la gu ogaaday in uu Suulida ku jiro ka dib markii haweenay ka mid ah dadka degan guriga ay ku nooleed Leylo cali ay ubaahatay suulida ka dibna ay Maqashay Dhawaq caruur Meel dheer ah.
Waxay iskuuga yeertay dadka dereska ah waxaana markii dambe kor laga qoday Suulidii waxaana la sheegayaa in Canuga oo dul sabeynaya Saxarada korkeeda laga soo qaaday.
Canugaas ayaa hadda waxaa haysa haweenay ka mid ah dadka degan xaafadaas oo sheegtay in ay korsaneyso.
Laylo cali ayaa waxay ku xiran tahay Xabsiga Saldhiga Galbeed ee Degmada Daharkenley ee Gobolka Banaadir ka dib markii ay ka soo xireen Xaafad ay ku dhuumaynaysay Haweenaydaas.
Waa markii labaad isbucii la soo dhaafay Degmadaas lagu arko falalkaas laxariira haweenka dhala Caruurta ku dhalanin Meherka ka dibna si ay isku ceeb Qariyaan sameeya falkasta oo ay ceebtooda ku dabool mayso.
Related Items:Featured, Maamulka Degmada Dharkenley oo ka hadlay Haweenay Canug ay dhashay Uladhaqantay Sikabaxsan Bini Aadanimada
Dilal Caawa ka dhacay Muqdisho
Madaxweynaha Maamulka Soomaaliland oo Gaaray Jabuuti